Amarro lagu soo rogay Xildhibaanada Soomaaliya [Daawo]
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliska Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa amarro culus kusoo rogay Xildhibaanada Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka, xilli uu jiro khilaaf siyaasadeed xooggan.
Qaasim Axmed Rooble, oo ah Afhayeenka Booliska dowladda Soomaaliya oo Shir Jaraa'id ku qabtey Muqdisho ayaa sheegay in amaanka xarunta gollaha shacabka aad loo adkeyn doono, islamarkaana aan loo ogolaan doonin Xildhibaanada inay hub la galaan.
"Amniga aad baa loo adkeyn doonaa, Xildhibaanada looma ogolaan doono inay hub la galaan xarunta, iskaba daayee hub, xitaa Istikiin ama Fandhicil la galaan xarunta," ayuu yiri Afhayeenka oo digniin culus u diray Xildhibaanada.
Hadalka Afhayeenka Booliska ayaa kusoo beegmaya xilli gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Cismaan Jawaari uu ku baaqay in si deg deg ah Ciidamada la duldhigay xarunta sharci-dejinta looga soo qaado, sidoo kalena lagu soo celiyo kuwii hore loogu ogaa.
Jawaari ayaa sheegay in wixii dhibaato amni darro ah ee ka yimaada Gollaha shacabka ay mas'uuliyadaasi qaadi doonaan Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayre.
Hoos ka Daawo Shirka Jaraa'id:
Jawaari oo eedeyn culus u jeediyay Farmaajo [War Saxaafadeed]
War Saxaafaded 30.03.2018. 22:27
Khilaafka jira ayaa hakiyay shaqooyinkii Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre iyadoo...
Jawaari oo loogu baaqay inuu iscasilo iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 17.03.2018. 14:55
Wasaaradda amniga Soomaaliya oo ka hadashay qabsashada Xarunta Baarlamaanka
Soomaliya 16.03.2018. 23:42
Jawaari oo shaaciyay cida ka dambeysa la wareegista xarunta Gollaha Shacabka
Soomaliya 16.03.2018. 22:02
Jawaari oo fahfaahiyay sababta baaqashada Kulanka Gollaha Shacabka
Soomaliya 31.03.2018. 09:40
Muudey: Mooshinka laga keenay Jawaari waa sharci, cidna ma diidi karto
Soomaliya 15.03.2018. 00:10
Kadib weerarkii Al-Shabab, waa sidee Xaaladda Villa Soomaaliya?
Soomaliya 25.02.2018. 12:05
Mooshinkii laga gudbiyay Jawaari oo fashilmay [Xogo dheeraad ah]
Soomaliya 14.03.2018. 20:31
Xasan Sheekh oo shaaciyey xudunta khilaafka dowlada Farmaajo iyo Kenya 21.02.2020. 18:05
Madaxweynaha Jubaland booqdey ciidamo ku wajahan Jamaame 21.02.2020. 17:15
Shariif oo shaaciyey mowqifkiisa booqashada Farmaajo ee Hargeysa 21.02.2020. 16:00
Farmaajo oo "lagu riixayo" in uu darajada ciidanimo ka qaado Bariise 21.02.2020. 12:13
Farmaajo oo saxiixay sharciga lagu muransan yahay ee doorashooyinka 21.02.2020. 00:41
Bariise: Leyma eryin, anigaa isu casilay faragelinta lagu hayo ciidanka 20.02.2020. 23:50